स्वतन्त्ररूपले सेवा दिँदा के अपराध भयो र ? मलाई ‘धम्की’ ! – Social Touch Khabar
त्यसैले अन्ततः म अर्को दिन त्यो ठाउँ छाडेर हिंडें। यो प्रकरणले मभित्र केही प्रश्नहरू जन्माएको छ। सरकारको जिम्मेवारी नागरिकहरुलाई शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र रोजगार सुनिश्चित गरेर तिनको जीवनस्तर सहज बनाउने हो कि सधैंभर तिनलाई अशिक्षित, अस्वस्थ र विपन्न राखेर त्यही विपन्नताका नाममा राजनीति गरिरहने? हामीले विकेन्द्रीकृत संघीय प्रणाली अपनाएको सेवा गाउँ-गाउँसम्म पुगोस् भनेर हो कि वडासम्म पार्टीगत राजनीति र पूर्वाग्रह हावी होस् भनेर हो ?